Showing posts sorted by relevance for query ကွန်ဒုံး. Sort by date Show all posts
5/23/2014 09:44:00 PM health-news tips
2/24/2014 09:14:00 AM health-news
4/07/2014 10:51:00 AM health-news
3/22/2014 12:50:00 PM health-news
2/11/2014 11:27:00 PM articles
4/22/2014 08:21:00 AM health-news
8/02/2013 01:39:00 PM health-news
6/28/2013 11:00:00 AM health-news world-news
6/05/2014 01:23:00 PM funny
တစ်ခါက အရမ်းကိုခေါင်လွန်းလှတဲ့နယ် မြို့လေးတစ်မြို့ရဲ့ကျန်းမာရေးဌာနတစ်ခုမှာ
သူနာပြုဆရာမလေး တစ်ယောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတယ်။ သူက (အပျို)ပေါ့။
တစ်နေ့တော့ အဲဒီ မြို့နယ်အပိုင် ဝေးလံခေါင်သီတဲ့ ရွာတွေများ ကလေးမွေးဖွားနှုန်းတွေ
များလွန်းနေတဲ့အတွက် လူဦးရေလျှော့ချဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး သားဆက်ခြားရေးစီမံချက်အရ
အဲဒီရွာတွေကို တိုင်းကျန်းမာရေးဌာနက တာဝန်ရှိသူတွေ၊ မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဌာန က
ကျန်းမာရေးမှူး ဆရာဝန်ကြီးတွေကိုယ်တိုင် ကွင်းဆင်းပြီး သားဆက်ခြားရေး စီမံချက်
အတွက် ရွာသားတွေကို ကျန်းမာရေးအသိပညာတွေ ဟောပြောပေးဖို့ အထူးစီမံချက်
ဆရာဝန်ကြီးတွေ၊ လူကြီးတွေက အဲဒီမှာ ကျန်းမာရေးအသိပညာတွေကို
ရွာသားတွေ သိရှိအောင် ဟောပြောသရုပ်ပြဖို့ သူနာပြုဆရာမလေးကို တာဝန်ပေး
ဟောပြောရမယ့် အကြောင်းအရာက သားဆက်ခြားဖို့ ကွန်ဒုံးသုံးစွဲဖို့ ဆိုတဲ့
စီမံချက်ဆောင်ရွက်မယ့် ရွာကိုရောက်အောင် တောတွေဖြတ် တောင်တွေကျော် နဲ့ခက်ခဲပင်ပန်းကြမ်းတမ်းစွာ သွားကြရတာပေါ့။ ရွာကိုရောက်တော့ရွာသားတွေအားလုံး ကို ခေါ်ပြီး ရွာကဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ဟောပြောပွဲလုပ်တော့တာပဲ။
သူနာပြုဆရာမလေးအလှည့်ပေါ့။ အဲဒီမှာပြသနာစတော့တာပါပဲ။ ရွာသားတွေ၊
လူကြီးတွေအားလုံးရဲ့အရှေ့မှာ သူပြောရတော့မှာကိုး။ ပြီးတော့ အပျိုကလဲဖြစ်ပြန် ပြောရမှာကလဲ ရှေ့မှာ ယောက်ျားသားတွေချည်း။ ပြောရ သရုပ်ပြရမယ့် အကြောင်းအရာကလဲ ကွန်ဒုံးသုံးစွဲပုံသုံးစွဲနည်း။ ခက်တော့နေပါပြီ။
ရှက်ကလဲရှက်။ ကြောက်လဲကြောက်နဲ့ မထူးတော့ပါဘူးဆိုပြီးပြောချရတော့တာ ပေါ့။ ပြောပုံကကြည့် (
ရှင်တို့ ညအိပ်ခါနီးရင်လေ………..ရှင်တို့ဟာကို ဟိုလေ…… ရှင်တို့ဟာလေ သိတယ်မဟုတ်လား ဆိုပြီး လက်ညှိုးလေးထောင်ပြသတဲ့။
ရွာသားတွေက ဟုတ်ကဲ့…ဟုတ်ကဲ့ပေါ့။ ပြီးတော့မှလက်ညှိုးလေးထောင်ပြရင်းက
ရှင်တို့ဟာကိုလေ အပေါ်ကနေဟောဒီလို စွပ်ချရတယ် …….ဆိုပြီး ကွန်ဒုံးလေးကို စွပ်ပြလိုက်ရော။
အဲဒီလိုလုပ်ပြီးမှ အိပ်ယာဝင်ကြပါ..လို့ပြောတယ်။ ပြီးတော့ရွာသားတွေကိုလည်း
ရှင်းကြရဲ့လား။ လွယ်လွယ်လေးပါလို့မေးလိုက်တော့….. ရွာသားတွေကလည်း ရှင်းပါတယ်ဆရာမဆိုပြီး ခေါင်းလေးတွေ ညိတ်ပြကြတာပေါ့။
အဲဒီလိုနဲ့ ဟောပြောပွဲပြီးတော့ ရွာသားတွေကို သူတို့နဲ့အတူပါလာတဲ့ ကွန်ဒုံး တွေကို ဝေပေးပြီးမှ ပြန်လာကြသတဲ့။
နောက်တစ်နှစ်ကြတော့ အဲဒီရွာရဲ့ ကလေးမွေးဖွားနှုန်းကို စာရင်းကောက်ကြည့် တဲ့အခါ……….. မနှစ်ကထက် (နှစ်ဆ) ပိုများနေသတဲ့။ အဲဒီမှာတင် လူကြီးတွေနဲ့အတူတူ အဲဒီသူနာပြုဆရာမလေးပါ မျက်လုံးတွေပြူးပြီး ပြာပြာသလဲ အဲဒီရွာကို အပြေးသွားကြရတော့တာပေါ့။
ရွာရောက်တော့ ချက်ခြင်းဆိုသလဲရွာသားတွေကိုစုပြီး မေးမြန်းကြရတော့တာပေါ့။ သူနာပြုဆရာမလေးက ဒေါသတကြီးနဲ့ ရွာသားတွေကို
ရှင်တို့ကလေးမွေးနှုန်းက မနှစ်ကထက် (နှစ်ဆ) ပိုများလာတယ်။ မနှစ်က ကျွန်မတို့ လာပြီးဟောပြောသလို မလိုက်နာကြဘူးလား။ ကျွန်မတို့ပေးသွားတဲ့ ဟိုပစ္စည်းလေးရော မသုံးကြဘူးလားလို့ မေးသတဲ့။
အဲဒီအခါ ရွာသားတစ်ဦးက ပြန်ပြောတာကတော့………..
အမယ်လေးသုံးတာပေါ့ဆရာမလေးရယ် ဆရာမလေးမှာသလိုသေသေချာချာကို လုပ်တာပါဗျာ……… ကျွန်တော်တို့အားလုံး ညအိပ်ရာမ၀င်ခင်မှာလေ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လက်ညှိုးကိုဟေားလိုထောင်….. ဆရာမလေးတို့ပေးသွားတဲ့ဟာလေးကို ဟောဒီလိုစွပ်…. ပြီးမှ မီးမှုတ်ပြီးအိပ်ယာဝင်ကြတာပါ……………… အဲဒါ ဆရာမလေးတို့ ပေးထားတဲ့ဟာလေးရဲ့ အစွမ်းမထက်မှာစိုးလို့လေ ကျွန်တော်တို့ မိုးလင်းတဲ့ အထိတောင် အဲဒီလက်ညှိုးကို အောက်ပြန်မစိုက်ပါဘူးဗျာ……………တဲ့။
4/27/2014 02:18:00 PM health-news
3/09/2014 02:01:00 PM woman-health
3/06/2014 10:22:00 PM health-news
အခွန်အကောက်နှုန်းထားများကို အမိန့်ကြော်ငြာစာများဖြင့် မကောက်ဘဲ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်သာ သတ်မှတ်ရမည့် ပထမဆုံး ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက် ဥပဒေကြမ်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ တင်သွင်း
2/26/2014 04:17:00 PM business-news
အခွန်အကောက်နှုန်းထားများကို အမိန့်ကြော်ငြာစာများဖြင့် မကောက်ဘဲ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် သတ်မှတ်ရမည့် ပထမဆုံးပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက် ဥပဒေကြမ်းကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ဒေါက်တာလင်းအောင်က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်ကကျင်းပသည့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးသို့ တင်သွင်းခဲ့သည်။
အခွန်အကောက် အမျိုးအစားများနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး ဘဏ္ဍာရေး ၀န်ကြီးဌာနသည် ကောက်ခံရန် အခွန်လျာထားချက်များကို ယခုတင်သွင်းသည့် ဥပဒေအတိုင်း ကောက်ခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အခွန်အကောက် နှုန်းထားများကို ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖြည့်စွက်ခြင်း၊ အစားထိုးခြင်း ဆောင်ရွက်လိုပါက ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက် ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်းအား ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့မှတစ်ဆင့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် တင်သွင်းရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဥပဒေကြမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
အဆိုပါ ဥပဒေအရ ပြည်ပတင်သွင်းသည့် ကုန်စည်ဖြစ်ပါက ကုန်းပေါ်ရောက် တန်ဖိုးပေါ်တွင် လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံအတွင်းတွင် ထုတ်လုပ်သည့် ကုန်စည်ဖြစ်ပါက ရောင်းရငွေအပေါ်တွင် ရာခိုင်နှုန်းအလိုက် အခွန်ကျသင့်စေမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အထူးကုန်စည်များဖြစ်သည့် စီးကရက်အခွန် ရာခိုင်နှုန်း ၁၀၀၊ ဆေးရွက်ကြီးအခွန် ရာခိုင်နှုန်း ၅၀၊ ဆေးပေါ့လိပ်၊ ဆေးပြင်းလိပ်၊ ဆေးတံသောက်ဆေးများ၊ ကွမ်းစားဆေးအမျိုးမျိုး၊ အရက်အမျိုးမျိုး၊ ဘီယာအမျိုးမျိုး၊ ၀ိုင်အမျိုးမျိုး၊ ကျွန်းသစ်လုံးနှင့် အခြေခံအဆင့်သာ ခွဲစိပ်ထားသည့် ကျွန်းခွဲသားများအား အခွန်ရာခိုင်နှုန်း ၅၀၊ ကျောက်မျက်ရတနာများအား အခွန်ရာခိုင်နှုန်း ၃၀၊ အပေါ့စားဘင်ကားများ၊ ဆလွန်း၊ ဆီဒင်နှင့် အပေါ့စားဝက်ဂွန်များ၊ ကူပေးကားများအား အခွန် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ အခွန်ရှစ်ရာခိုင်နှုန်း ကျသင့်စေမည်ဖြစ်ကြောင်း ဥပဒေတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ထို့အပြင် အခွန်မကျသင့်သည့် ကုန်စည်များတွင် စပါး၊ ဂျုံစေ့၊ ပြောင်းအမျိုမျိုးနှင့် အခြားသီးနှံများ၊ မြေပဲ၊ နှမ်း၊ မုန်ညင်းစေ့၊ နေကြာစေ့၊ ဆီအုန်း၊ ကြံ၊ ဆား၊ ဓာတ်မြေသြဇာ၊ အုန်းဆီ၊ ကွန်ဒုံး၊ ဆန်၊ ဆန်ကွဲ၊ နိုင်ငံတော်အလံ၊ ကြက်ဥ၊ ဘဲဥ စသည်ဖြင့် ၇၂ မျိုးအား ပြည်တွင်း၌ ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းဖြစ်ပါက ရောင်းရငွေအပေါ်တွင် လည်းကောင်း၊ ပြည်ပမှ တင်သွင်းခြင်းဖြစ်ပါက ကုန်းပေါ်ရောက် တန်ဖိုးအပေါ်တွင် လည်းကောင်း ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် မကျသင့်စေရဟု ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။
ကုန်စည်တင်သွင်းခြင်း၊ ကုန်သွယ်မှု ဆောင်ရွက်ခြင်းများအတွက် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ငါးရာခိုင်နှုန်း၊ ဘဏ္ဍာရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ အမိန့်ကြော်ငြာစာဖြင့် ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုသည့် ၀န်ဆောင်မှုများမှအပ ကျန်ဝန်ဆောင်မှုအပေါ် ရငွေအပေါ် ငါးရာခိုင်နှုန်းကို ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကျသင့်စေမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၀င်ငွေခွန်အနေဖြင့် တစ်ကျပ်မှ ငါးသိန်းကျပ်အထိအား တစ်ရာခိုင်နှုန်း၊ ၅၀၀၀၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် ၁၀၀၀၀၀၀ အထိ နှစ်ရာခိုင်နှုန်း၊ ၁၀၀၀၀၀၁ ကျပ်မှ ၁၅၀၀၀၀၀ ကျပ်အထိ သုံးရာခိုင်နှုန်း၊ ကျပ် ၁၅၀၀၀၀၁ မှ ကျပ် ၂၀၀၀၀၀၀ အထိ လေးရာခိုင်နှုန်း၊ ၂၀၀၀၀၀၀၁ ကျပ်မှ အထက်အား ရာခိုင်နှုန်း ၂၀ စသည်ဖြင့် အဆင့်လိုက်ပေးဆောင်ရန် သတ်မှတ်ထားသော သက်သာခွင့်များ ခုနှိမ်ပြီးနောက် ကျန်လစာဝင်ငွေ အပေါ်တွင် ၀င်ငွေခွန်စည်းကြပ်ရန် ၀င်ငွေအလွှာ သတ်မှတ်ထားကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများ အက်ဥပဒေအရဖြစ်စေ၊ ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ် အထူးကုမ္ပဏီ အက်ဥပဒေအရဖြစ်စေ မြန်မာနိုင်ငံ၌ မှတ်ပုံတင်ပြီး တည်ထောင်ထားသည့် ကုမ္ပဏီဖြစ်လျှင် ၀င်ငွေခွန် ဥပဒေပုဒ်မ ၆ အရ သက်သာခွင့်များ မနုတ်မီ ယင်းကုမ္ပဏီက ရရှိသည့် ကျပ်ငွေဖြင့် စုစုပေါင်း ၀င်ငွေအပေါ် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ၀င်ငွေခွန် ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း စည်းကြပ်ထားသည်။
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်များ ကောက်ခံရန် မူလလျာထားချက်များ အနေဖြင့် ပြည်တွင်းထွက်ကုန်နှင့် ပြည်သူပြည်သားများ သုံးစွဲမှုအပေါ် ကောက်ခံသည့် အခွန်အကောက် ခန့်မှန်းခြေ ကျပ်သန်း ၁၄၆၄၄၈၇ ဒသမ ၇၇၄၊ ၀င်ငွေနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် ကောက်ခံသည့် အခွန်အကောက် ကျပ်သန်း ၁၆၆၄၉၃၂ ဒသမ ၇၂၉၊ အကောက်ခွန်မှ ကျပ်သန်း ၁၉၀၀၀၀၊ နိုင်ငံပိုင် သယံဇာတများ ထုတ်ယူသုံးစွဲမှုအပေါ် ကောက်ခံသည့် အခွန်အကောက် ကျပ်သန်း ၁၅၇၁၁၆၀ ဒသမ ၄၄၀ တို့ လျာထားကြောင်း သိရသည်။
အမိန့်ကြော်ငြာစာများဖြင့် အခွန်များ ကောက်ခံနေခြင်းတွင် ရှုပ်ထွေးမှုများ ရှိနေကြောင်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်းက ပြောကြားထားသည်။
2/24/2014 10:44:00 PM health-news
2/19/2014 07:42:00 AM health-news
တစ်ကြိမ်တစ်ခါ အသိတရား ကင်းလွတ် သွားတာနဲ့ သင့်ခန္ဓာ ကိုယ်ထဲကို ရောဂါပိုး ဝင်ရောက် သွားနိုင် ပါတယ်။
တကယ်လို့ သင်ဟာ အပျော်အပါး လိုက်စားရင် အကာအကွယ် ကွန်ဒုံးကို မသုံးဘူး ဆိုရင်ပေါ့။ “တစ်ခါတည်းပါ” ဆိုတဲ့ အမှားကြောင့် ဖြစ်တတ်တဲ့ ရောဂါ ပိုးတွေ ကတော့ အများကြီး ရှိပါတယ်။
ကုသလို့ ရတဲ့ ဘက်တီးရီးယားပိုး ကူးစက်မှုပါ။ မကုသဘဲ နေရင်တော့ ဘဝ အဖော်ထံ ကူးစက် နိုင်ပါတယ်။
-တစ်လင် တစ်မယားစနစ် ကျင့်သုံးတာက အကောင်းဆုံး ကာကွယ်မှုပါ။
-အပျော်အပါး လိုက်စားမိရင် နှစ်စဉ်ရောဂါစစ်ဆေးပါ။
-ဆီးနဲ့သုက်ရည် မဟုတ်တဲ့ ပုံမမှန်အရည်ထွက်ခြင်း
-မကုသဘဲနေရင် နာကျင်မှု၊ ဖျားခြင်းစတာတွေ ခံစားရတတ်ပါတယ်။
ဂနိုပိုးကြောင့် ဖြစ်ပြီး ရောဂါကို အလွယ်တကူ ကုသ နိုင်ပါတယ်။
-ကွန်ဒုံးသုံးပါ (ဂနိုပိုးဟာ သုက်ရည်နဲ့ မိန်းမကိုယ်က ထွက်တဲ့ အရည်က တစ်ဆင့် အဓိက ကူးစက် နိုင်ပါတယ်)
-ရောဂါမဖြစ်အောင် တစ်လင်တစ်မယားစနစ် ကျင့်သုံးပါ။
-ရောဂါပိုး ကူးစက် ခံရပြီး ၁၀ ရက်အတွင်း ရောဂါ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
-ဆီးပြွန်ချောင်း တစ်ဝိုက် နီရဲပြီး ပုံမမှန် အရည်ထွက် တတ်ပါတယ်။
-ဆီးသွားရင်း နာကျင်မှုနဲ့ မသက်မသာ ဖြစ်မှုတို့ ခံစားရ တတ်ပါတယ်။
-ပဋိဇီဝ ပိုးသတ်ဆေး သောက်ဆေး
-ဆစ်ဖလစ် ကာလသား ရောဂါဟာလည်း ဘက်တီးရီးယား ပိုးကြောင့် ဖြစ်တာပါ။
-ဆစ်ဖလစ် ပိုးဟာ ကွန်ဒုံး သုံးရင်တောင် အပြည့်အဝ ကာကွယ်မှု မပေးနိုင်ပါ။
-တစ်လင် တစ်မယား စနစ် ကျင့်သုံးတာက အကောင်းဆုံး ကာကွယ်မှုပါ။
-ပြင်းထန်လာပါက လက်၊ ခြေထောက်မှာ အရေပြား အနီကွက်ဖြစ်ခြင်း
-လက်ဖဝါး၊ ခြေဖဝါးမှာ အနီစက်ပေါ်ခြင်း
-ဖျားခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ အစာစားချင်စိတ် နည်းခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်း
-ပင်နီဆီလင် လိင်အင်္ဂါရေယုန် ရေယုန်ဗိုင်းရပ်စ် (Herpes Simplex Virus) ကြောင့် ဖြစ်တာပါ။
-ကွန်ဒုံးသုံးရင် ကူးစက်မှု လျော့နည်းပေမယ့် အရေပြားချင်း ထိတွေ့မှုကြောင့်လည်း ရေယုန် ကူးတတ်ပါတယ်။
-တစ်လင် တစ်မယား စနစ်ကျင့်သုံးပါ။
-ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဝင်ပြီး နှစ်ပတ် အတွင်း ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။
-လိင်အင်္ဂါ တစ်လျှောက် ယားယံခြင်း၊ ပူစပ်ခြင်း၊ နာကျင်ခြင်းခံစားရကာ အရည်ကြည်ဖု အသေးတွေ ပေါက်လေ့ ရှိပါတယ်။
-ရေယုန်ကို ဆီးနဲ့ထိတွေ့မိရင် နာကျင်တတ်ပါတယ်။
-ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ဖျားခြင်း ခံစားရတတ်ပါတယ်။
Human Immunodeficiency ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ဖြစ်ပြီး လူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ခုခံအား စနစ်ကို အားနည်း စေပါတယ်။
-လိင်ဆက်ဆံမှုနဲ့ Oral Sex အတွက် ကွန်ဒုံးသုံးပါ။
-တစ်လင် တစ်မယား စနစ် ကျင့်သုံးတာက အထိရောက်ဆုံး ကာကွယ်မှုပါ။
-အစောပိုင်း အဆင့်မှာ တုပ်ကွေးလို ဖျားနာမှု ခံစားရခြင်း
-CD4 ဆဲလ်ပမာဏဟာ ပုံမှန်အောက် ကျသွားတဲ့အခါ သားငံရည်ကျိတ် ရောင်ရမ်းခြင်း၊ အရေပြား ပြဿနာနဲ့ ပါးစပ် အနာပေါက်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ် တတ်ပါတယ်။
-CD4 ဆဲလ် ထပ်မံ ကျသွားတဲ့အခါ ရေယုန်နဲ့ ခါးပတ်ရေယုန်လို အရေပြားပြဿနာ ဖြစ်လာ တတ်ပါတယ်။
-CD4 ဆဲလ် အလွန်အမင်း ကျသွားတဲ့အခါ AIDS ရောဂါ ဖြစ်သွားပါတယ်။
12/16/2013 11:41:00 AM strange-news
တောင်အာဖရိမှာ ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဟာ အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုတဲ့ ကွန်ဒုံးတစ်ခုကို
တီထွင်ခဲ့ပါတယ်။ ထို ကွန်ဒုံးရဲ့ထူးခြားချက်က အတွင်းမှာ ခွေးသွားစိတ်တွေ တပ်ဆင်ထားတာပါပဲ။
အမျိူးသမီးများကို အဓမ္မပြုကျင့်ခံရတဲ့ ဒဏ်က ကာကွယ်ဖို့ လို့ ဆိုထားပါတယ်။
ဒီ ကွန်ဒုံးကို Rape-aXe လို့ အမည်ပေးထားပါတယ်။ အဓမ္မပြုကျင့်တဲ့ အမျိုးသားများဟာ ထိုနေရာကို
မိမိ လိင်အင်္ဂါ ထည့်သွင်းမိတဲ့ အခါ ခွေးသွားလို အချွန်တွေနဲ့ စူးနေမှာဖြစ်ပြီး ခွဲစိတ်မှသာ ပြန်လည် ထုတ်ပစ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လို့ .. ဒီ ကွန်ဒုံး ဖန်တီးသူ Dr.Sonnet Ehlers က ဆိုထားပါတယ်။
တောင်အာဖရိက မှာ နှစ်စဉ် အမျိုးသမီးများဟာ နာရီပိုင်းနဲ့ အမျှ အဓမ္မကျင့်ခံနေရတဲ့ အတွက် ထိုအဖြစ်အဖျက်များက
ကင်းဝေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။
12/07/2013 10:15:00 PM strange-news